China Baron OEM & ODM Service (Yakasarudzika chitaridzi Service) Kugadzira uye Fekitori | Bharoni
Baron OEM & ODM Service (Yakasarudzika chitaridzi Service)
Bharoni ndiyo yepamusoro China mucheche manapukeni mugadziri & mutengesi, isu tiri kutsvaga vanogovanisa pasirese, uye nyanzvi manapukeni akazvimirira chitaridzi sevhisi inopihwawo. Tine simba rekugadzira kugona uye akanakisa manapukeni muchina.
· Mwana mucheche
· Mucheche Kurovedza Bhurugwa & Dhonza-up Manapukeni Mabhurugwa
· Eco Chinjera
· Eco Dhonza-up Dhiradhi bhurukwa
· Muchinjiro Wevakuru
· Bhurukwa revanhu vakuru
· Bhurukwa raLady Diaper
· Mukadzikadzi Mutsanana
· Macheche Anopukuta
· Eco Anopukuta
Baron (China) Co. Ltd yakawanikwa muna 2005. Iyo kambani inopa yakazara yakazara masevhisi anosanganisira chigadzirwa kutsvagisa & kusimudzira, dhizaini, yakazara chiyero kugadzirwa, kutengesa uye vatengi mabasa, uye vane yakasimba simba mukurumbira wehunhu hwechigadzirwa mhando, hunyanzvi uye vatengi masevhisi uku uchikwanisa kugara uchipa yakanakisa kukosha kune vatengi vedu.
Bharoni yakavaka zvivakwa zvakajairika uye musangano unosangana nematanho epasi rose uye 8 yakanyanya yepamusoro machira ekugadzira manadhi. Iyo kambani inoshandisa Hengchang neHanwei zvigadzirwa zvekugadzira, inova yepamusoro zvigadzirwa zvekugadzira zvigadzirwa muChina. Iyo midziyo inorema 100T uye inoona kugadzikana kweBesuper zvigadzirwa. Iyo yazvino yekugadzira yepagore ndeye 800 mamirioni pcs, iyo yakaenzana ne3300 40HQ midziyo.
Baron akashanda anotungamira ekutsvagisa nekusimudzira nyanzvi, vane makore makumi maviri neruzivo muindastiri indasitiri. Iyo kambani ine zvinopfuura makumi maviri nematatu nyika patent pamachira uye inogara ichizvipira pane hunyanzvi hwekugadzira yepamusoro-kumagumo mhando mucheche mucheche.
Parizvino, Baron akawana zvitupa zveBRC, FDA, CE, BV, uye SMETA zvekambani uye SGS, ISO uye FSC chitupa chezvigadzirwa.
Bharoni inovhara nzvimbo inosvika 33,050 mativi emamita, iine nzvimbo yekuvakira ye 29,328.57 mativi emamita. Zvinopfuura zviuru makumi mapfumbamwe zvemamir zvakachena uye zvakarongedzwa imba yekuchengetera yakagadzirirwa nemoto yekurwisa system uye kufefetera system kuona zvigadzirwa zvigadzirwa. Kurongeka kweimba yekuchengetera kunonyatsotevera iyo BRC neBV fekitori yekuongorora zviyero. Iyo yekuendesa nharaunda inopfuura 4000 mativi emamita inogona kutora mataera gumi panguva imwe chete.
Mutengo Wepasi Pose
Bharoni anotarisisa zvakanyanya kune mhando yezvinhu. Iyo kambani inobatana nevatungamiriri vazhinji vezvinhu zvinotungamira, kusanganisira Sumitomo, BASF, 3M, Hankel nemamwe makambani epasi rose eFortune 500.
Hunhu Kudzora Center
Bharoni akaita bvunzo pane zvese zvigadzirwa, uye akapedza zvigadzirwa panguva uye mushure mekugadzira kuongorora mhando yechigadzirwa kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Zvichakadaro, maitiro ekambani ekudzora mhando uye manejimendi akavimbiswa nevechitatu mapato, kusanganisira BRC, FDA, CE, ISO 90012008. Zvese zvekuyedza zviridzwa zvinoongororwa neane chiremera mapato echitatu kamwe pagore.
Nhasi, Bharoni yagadzira mabudiro mazhinji muzvigadzirwa zvehunyanzvi, zvinosanganisira zvinogadzirwa nemishenjere manapukeni, manapukeni akafanana neT, Ultra-yakatetepa macomputer manapukeni, zvigadzirwa izvi zvinosangana nezvinodiwa nevatengi vega uye yavo misika zviyero. Eco-biodegradable mucheche manapukeni akagadzirwa nekambani inoonekwa seine yakanyanya biodegradability mwero pasirese uye inozivikanwa zvakare munyika dzakasimukira senge USA, UK, POLAND, AUSTRAILA nezvimwe.
Yenguva refu Kubatana
Kwemakore, Baron ave akazvipira pakuve anotungamira pasi rese mupepeti wemacheche evana uye nekupa yakasarudzika kukosha kune vatinoshanda navo, nokudaro tichigadzira yekuhwina-kuhwina mamiriro ebhizinesi nevatengi.
Pashure: OEM / ODM Fekitori Yekurara Mapepa - Besuper Bamboo Planet Yevacheche Inochira - Bharoni
Zvadaro: Besuper Bamboo Planet mucheche mucheche
Yakasarudzika chitaridzi diaper inogadzira
Eco Dhonza-up Dhiradhi bhurukwa
Bhatiri reLady Diaper
Mukadzi Wehutsanana Napkin
Mucheka unoraswa, Super Absorbency Yevakuru Dhivha, Yakakwira Hunhu Eco Diaper, Mwana mucheche achangoberekwa, Vacheche Vanopukuta Kune Rinonzwisisa Ganda, Mwana mucheche,
Mucheka unoraswa, Vacheche Vanopukuta Kune Rinonzwisisa Ganda, Mwana mucheche achangoberekwa, Yakakwira Hunhu Eco Diaper, Super Absorbency Yevakuru Dhivha, Mwana mucheche,